पूरा गर्न कसरी एक जर्मन छ ।
कुनै पनि भिषा छूट ठाउँमा, तिनीहरूले छन् प्रत्याभूति, बाँच्न के गर्न ध्यान गर्न कहिले बैठक छ । र कहाँ जान लागि जर्मन भने, तपाईं पहिले देखि नै जर्मनी मा.
तर, हामी सबैभन्दा छन् सिकाउनुभयो जर्मन थिएन पढ्न क्लासिक मा मूल छ । कसैले आवश्यक जर्मन काम लागि, कसैले योजना एक गर्मी जर्मनी यात्रा, र कसैले न बढी न कम विवाह गर्न चाहन्छ एक जर्मन छ । तपाईं भन्न, तर कहाँ के हामी यो प्राप्त, यो जर्मन छ । वरिपरि वास्तवमा एक जर्मन भाषा बोल्ने व्यक्ति र एक जर्मन बसिरहेका, चुपचाप आफ्नो जर्मनी, जर्मन बियर पिएपछि र एक खेलमा विरुद्ध डर्टमन्ड वा देखिन्छ । कहाँ यो पाउन, जर्मन जस्तै प्राप्त गर्न उहाँलाई थाहा छ । उम, महिलाहरु (कुनै महिलाहरु पनि, चिन्ता छैन) किनभने हामी, अब सबै विवरण भन्नेछु । तपाईं सिक्न, र अन्य सामाजिक सञ्जाल हाम्रो उमेर मा वैश्विक र फैशन स्मार्टफोन मा यो अनौठो हुने छैन, दर्ता गर्न कम्तीमा यी साइटहरू को एक छ । हरेक पाँचौं को जर्मन औसत विवाह छैन र सक्रिय लागि देख महिला आफ्नो हृदय वा महिलाहरु गर्न सँगै आनन्द । मंत्रालय को तथ्याङ्क को जर्मनी आयोजित एक सर्वेक्षण जवानहरूले बीचमा उमेर बीस वर्ष र फेला कि तीस-एक उत्तरदाताओं कम्तिमा एक पटक सेवा प्रयोग डेटिङ वेबसाइट र विवाह एजेंसियों मा इन्टरनेट । बीस-दुई उत्तरदाताओं को स्वीकारे तिनीहरूले यो बारेमा लाग्यो र शायद लागि साइन अप को एक, यी साइटहरु मा निकट भविष्य । इन्टरनेट मा, जबकि महिला नजर लागि पहिलो तस्वीर र त्यसपछि मा यो पेशा छ । यो पनि विचारणीय छ कि महिला अक्सर मानिसहरू छनौट आफ्नो उमेर वा वृद्ध, र मानिसहरू ज्यादातर आकर्षित गर्न जवान बालिका वा महिलाहरु कम्तीमा कान्छो उमेर छ, कि सिद्धान्त मा, अनुकूल गर्न प्रत्येक अन्य । जर्मन जस्तै संग प्राप्त गर्न सुन्दर जर्मन बालिका अनलाइन, अक्सर यस्तो मान्छे अन्त मा एक लामो पत्र र एक यात्रा बालिका जर्मनी मा, तर त्यहाँ, तपाईं पहिले नै थाहा ड्रिल छ. यी साइटहरु पनि धेरै एकल महिलाहरु को उमेर मा तीस पाँच सक्दैन जसले एक साथी पाउन को स्तर मा दैनिक जीवन छ । एक अध्ययन अनुसार विश्वविद्यालय देखि हैम्बर्ग, दुई तिहाई भन्दा महिलाको उमेर तीस वर्ष छैन एक स्थायी साथी । यो विचारणीय छ कि उच्च सामाजिक स्थिति र महिला शिक्षा स्तर, अधिक संभावना छ. त्यो को उमेर गर्न, एक्लै रहन । उच्चतम प्रतिशत एकल बीचमा शोधकर्ताओं र प्राध्यापकहरू को विश्वविद्यालयहरु । इन्टरनेट प्रस्ताव विशाल मौका, को मामला मा मात्र जानकारी भेट्टाउने, तर पनि संचार । प्रयोग गर्न यो मौका सम्झना छैन बनाउन मौका नयाँ सम्पर्क र अनलाइन डेटिङ । शायद अर्को वार्ताकार मा च्याट पछि हुनेछ, आफ्नो एक मात्र प्रेमी । र शायद तपाईं हुनेछ प्रेम पाउन एक डेटिङ साइट, मा. तपाईं सोधे गरिनेछ जवाफ विभिन्न प्रश्नहरू आफैलाई बारेमा कि प्रकट आफ्नो, प्राथमिकता र चासो, र मा भर्न को बारे मा विवरण संभावित साथी गरेको उमेर, स्थिति, दृश्य मा जीवन र परिवार, आदि. राम्रो अधिक जस्तै एक परी कथा देखि एक डेटाबेस को दर्ता प्रयोगकर्ता तपाईं चढाएको गरिनेछ एक सूची को उम्मेदवार सबैभन्दा संगत गर्न आफ्नो प्रोफाइल. ती लागि जो विचार अनलाइन डेटिङ व्यापार, तपाईं बताउन कहाँ अरू फसाउन जर्मन छ । सबैभन्दा तार्किक विकल्प छ, को पाठ्यक्रम, जर्मनी मा. तर कुनै कुरा कसरी तार्किक यो विकल्प हुन सक्छ, यो पनि सबैभन्दा महंगा र विकल्प । किन । जर्मन सारा मा प्रयोग छैनन् बालिका पूरा गर्न सडकमा मा, सबवे वा बस र अन्य सार्वजनिक ठाउँमा, र मजा पक्ष मा अक्सर रूपमा छलफल बिना परिणामहरू र प्रतिबद्धता गर्न संवाद जारी छ । यस प्रश्नको जवाफ अधिकांश मा, स्कूल मा विश्वविद्यालय, मित्र संग मा काम. कसैले कसैले कसैलाई शुरू, तिनीहरूले पहिले नै थियो साधारण मित्र वा परिचितों, तिनीहरूले लामो समय मा मित्र को नै सर्कल मित्र को, र बाटो यो विकसित र बाहिर लागे । त्यसैले, तपाईं आउन भने जर्मनी संग प्राप्त गर्न उनको भविष्य पति-एक जर्मन छ, यो लायक छैन प्रवाह भर को रुचि देखिन्छ र पहिलो दोस्रो, आफ्नो रहन । जर्मनी मा, जर्मन भाषा पाठ्यक्रम, को मौका पूरा गर्न केही राम्रो टर्की वा इटालियन भन्दा धेरै उच्च हो. त्यसैले यो या त विकल्प संग स्कूल-काम, वा खोज्न अवस्थामा जस्तै, एक फुटबल खेलमा वा एक खेल घटना, कन्सर्ट, जब सबै एकताबद्ध छन् द्वारा यो लहर को सकारात्मक मूड र मान्छे छन्, एक सानो आराम बीच दूरी कि आफ्नो जर्मन र बाहिर संसारमा कम छ । वा हेर्न को लागि एक अवस्था गर्दा बीच दूरी तपाईं र जर्मन कम हुनेछ किनभने बाह्य परिस्थिति, उदाहरणका लागि, एक समयमा तीन-घण्टा उडान मास्को देखि बर्लिन मा सानो घर छ । किन यस्तो अवस्था छैन सुरु गर्न एक संग छिमेकीको-बर्गर.
वा किन छैन सामेल जर्मन एक्लै बसिरहेका मा रेल, मा अग्रिम, को पाठ्यक्रम, सोधेर भने
यस्तो मौका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ एक न्यूनतम क्रम मा बोल्ने अभ्यास जर्मन छ । तर, अर्को बाटो छ संग प्राप्त गर्न को जर्मन मा आफ्नो देशी वातावरण, र कुनै जहाँ अरू तर एक जर्मन होटल मा मलोर्का. यी स्पेनी रिसोर्ट लामो छलफल गरिएको नम्बर एक छुट्टी को जर्मन युवा गर्न आउँदा, सूर्य, समुद्र तट, दल, डेटिङ, बालिका । जर्मन विद्यार्थी र स्नातक कम्पनी भर हुनेछ, पुस्तक टिकट र जाने गर्न न्यानो साइड अन्तर्गत दक्षिणी रवि, पिउन र सो आधा दिन समुद्र तट मा पछि एक शोर पार्टी । जर्मन सधैं द्वारा मान्यता छ भन्ने तथ्यलाई बिहान तिनीहरूले गरे सिट पूल द्वारा र साँझ पट्टी छ अधिक शोर भन्दा नृत्य र संग इश्कबाज बालिका । त्यसैले यो समय यो प्रयोग गर्न आवश्यक छ दिल के को जर्मन रहन सुन्दर सुन्दर कि त ध्यान मला उहाँलाई को फिर्ता मा. तर मात्र विदेश तर पनि घरमा सजिलै र मर्यादा संग प्राप्त गर्न एक विदेशीले छ । सुरु गर्न लाग्छ, जहाँ नरक जर्मनी मा तपाईं पूरा गर्न सक्छन्.
निस्सन्देह, साधारण संस्करणमा मास्को मा वा
अधिकांश पर्यटक आउन ठूलो शहर को युरोपेली भाग को, जर्मनी वा बनाउँछ भ्रमण को सुनको रिङ, वा पठाए यात्रा गर्न ट्रान्स- रेलवे. यहाँ मा विमानस्थल, रेल, मेट्रो, बस वा सडक मा देखेर भ्रमित पर्यटक खडा एक नक्शा संग हात मा, हामी पर्छ छैन शर्म र प्यारा मुस्कान, प्रदान गर्न मदत. काम भ्रमण पुस्तिका, उडान परिचर वा प्रशासक मा एक छात्रावास वा होटल एक आदर्श विकल्प गर्नेहरूका लागि मात्र सपना पूरा गर्न कसरी एक विदेशीले, संसारको सबैभन्दा ठूलो समुदाय को यात्री छ । यात्री त आफूलाई कल गर्नेहरूलाई यात्रा रहन, छैन होटल वा होटल, र अन्य यात्री, र पाहुना खेल्छ गर्न. छ यात्रा गर्न एक अद्वितीय अवसर अन्वेषण मात्र जर्मन, तर सामान्य मा मान्छे संग सबै दुनिया भर देखि, कुनै पनि राष्ट्रियता र पेशा गर्न बारेमा धेरै कुरा सिक्न यो संसारमा । ती छैन जो आफ्नै घरमा अटाउन सक्छन् अतिथि, छनौट स्थिति त यो पूरा गर्न सम्भव केन्द्र मा, वरिपरि टहलने पर्यटक ठाउँमा, शो देखि शहर भित्र छ । यात्री यात्रा मा रूपमा, अभ्यास देखाउँछ, धेरै कम हुन्छन् र कहिलेकाहीं यात्री गर्दै त्यसपछि पनि घनिष्ठ मित्र, प्रत्येक अन्य भ्रमण, यात्रा सँगै । इतिहास को एउटा मेरो साथी को छ त भेट उनको भविष्य पति एक पटक बसे एकै रातमा मा, आफ्नो प्रेमिका जो अर्को दिन गर्न अनुमानित थियो आइपुग्दा दुई जर्मन, यात्रा मा ट्रान्स- यो कथा मा तपाईं बनाउन सक्नुहुन्छ चलचित्रहरू र आफ्नो लेख्न. उहाँले आए फेरि उनको दुई महिना मा, दौरा को लम्बाइ र चौडाई जर्मनी माध्यम पारित, चीन र मङ्गोलिया, फर्केपछि उनको छ । त्यसपछि तीन महिना तिनीहरूले सँगै यात्रा भर सयौं किलोमिटर र किलोमिटर, भर देशहरू र महाद्वीप, र धेरै चाँडै त्यो जा गर्न अब उहाँलाई लागि राम्रो छ । रुचि गर्नेहरूका लागि रहन नजिक जमीन र कसको टाढा रोमान्स यात्रा, छ जो एक मानिस काम र व्यापार तपाईं को लागि हो धेरै मौका छ । जर्मनी मा सबै भन्दा ठूलो व्यापार साझेदार को जर्मनी हरेक वर्ष, जर्मनी मा आयोजित थियो सयौं प्रदर्शनीहरू र सम्मेलन गर्न समर्पित मुद्दाहरू को थप सहयोग । यो वातावरण मा, तपाईं बनाउन सक्नुहुन्छ ज्ञान को उच्चतम स्तर, र थाह जो, शायद केही जर्मन निर्देशक छ लामो समय को लागि देख गरिएको एक नयाँ सचिव र छैन मात्र । जर्मन गरे पछि छैन स्कूल भर्ना गर्न तुरुन्तै विश्वविद्यालय मा र बनाउन केही सामाजिक वर्ष, वा यात्रा गर्न, र अक्सर दुवै सँगै । त्यसैले तिनीहरूले हरेक वर्ष अधिक र अधिक, जर्मन, जर्मनी मा एक राम्रो काम गर्न मदत समाज, जर्मन सिक्न र हेर्न को लागि यस प्रश्नको जवाफ, त्यसपछि के छ यो रहस्यमय जर्मन प्राण । लागि छ महिना वा एक वर्ष आउन तिनीहरूले अक्सर सिकाउन जर्मन भाषा मा विश्वविद्यालय र भाषा केन्द्र को संस्थान कुरा, जर्मन र कुराकानी जर्मन भाषा बोल्ने दर्शक । यदि आफ्नो शहर छ. यस्तो संगठन निश्चित गर्न जाने छलफल र बैठकहरू, यो एक ठूलो मौका सुन्न बाँच्न जर्मन भाषा र अभ्यास गर्न संवादी जर्मन छ । र तपाईं यो थाहा अघि, तपाईं एक नयाँ कथा लेख्न आफ्नो र छोराछोरीलाई बताउन र मित्र । कथाहरू बारेमा कसरी राजकुमार फेला आफ्नो राजकुमारी, लामो गरिएको लागि मात्र छोराछोरीलाई तर पनि वयस्क लागि. संसार मा जहाँ राजकुमार लगाएका छन् व्यापार सूट र सम्बन्ध र सवारी मा वरिपरि मर्सिडीज सट्टा सेतो घोडाहरू, गर्न अनुकूल गर्न नयाँ नियम को यो संसारमा र देखि उम्कन महल मा प्रकाश । राजकुमारी अब मात्र निर्दोष र पढ्न चतुर पुस्तकहरू, तिनीहरूले पनि लगनशील भई विदेशी भाषा सिक्न र भन्ने विश्वास, कहीं पनि पछि सात हिल्स (भिसा र किनारा), राज्य राज्य (युरोपेली संघ), विश्व (ओछ्यान मा बसिरहेका देखि) आफ्नो राजकुमार । र अब यो माथि हुनेछ आफ्नो ल्यापटप र अनलाइन जाने, र शायद तिनीहरूले पाउन छौँ, प्रत्येक अन्य वा शायद तिनीहरूले मौका द्वारा पूरा विमानस्थलमा र माथि मिश्रण बैग वा विवाह मा आफ्नो सबै भन्दा राम्रो मित्र हो कि ठीक त्यही जब हामी प्रत्येक अन्य पाएका गर्दा कम से कम आशा गर्न चाहनुहुन्छ जर्मन सिक्न. स्कूल भर्ना अनलाइन जर्मनी । शिक्षाका लागि आवश्यक कम्प्युटर, स्मार्टफोनको वा ट्याब्लेट संग इन्टरनेट पहुँच र कहीं देखि अनलाइन समय मा तपाईं को लागि सुविधाजनक छ ।
← अनलाइन डेटिङ प्रोफाइल
भावनाहरु कुनै जम्मा बोनस मा, सूची को अनलाइन भावनाहरु →